Madaxweyne Waare oo lagu eedeeya inuu xirtay Xarunta Baarlamaanka Hirshabeelle – Kalfadhi
Madaxweyne Waare oo lagu eedeeya inuu xirtay Xarunta Baarlamaanka Hirshabeelle
JOWHAR, 05 FEB 2019 (KALFADHI)-Xildhibaan Maxamuud Cabdulle Batalaale oo katirsan Xubnaha Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa Kalfadhi u sheegay in Ciidamo katirsan kuwa ilaalada Madaxtooyada Hirshabeelle ay maanta xirayn Xaruntii Baarlamaanka maamulkaasi.
Xildhibaanka ayaa Kalfadhi u sheegay in Ciidankaan ay ka amar-qaataan Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, markii ay xarunta soo gaarayn ayey Xildhibaanada ku wargeliyeen in ay ka baxaan hoolka amarna lagu soo siiyay in aan kulan dambe lagu qaban ilaa amar dambe sida uu kalfadhi u sheegay Xildhibaan Maxamuud Cabdulle.
“Guddiyada joogtada ah oo shirsan ayaa waxaa noo yimid Ciidamo uu soo diray Madaxweyne Waare, waxay nagu wargeliyeen in aan ka baxno xarunta baarlamaanka ciddii diidana talaabo laga qaadi doono” ayuu Kalfadhi sheegay Xildhibaan Batalaale.
“Arintaan waa xad gudub in Ciidamo xoog lagu qabsado xarunta Baarlamaanka, wixii ka dhasha Madaxweyne Waare ayaa qaadan doono”ayuu yiri Maxamuud Cabdulle Batalaale oo katirsan Baarlamaanka Hirshabeelle.
Madaxweynaha Maamulka Hirshabeella Maxamed Cabdi Waare iyo Mas’uuliyiinnta kale ee Hirshabeelle oo ay arintaan quseyso oo aan la xariirnay ayaa ka jawaabin wicitaankayna si aan wax uga weydiino, hayeeshee mas’uuliyiin kale oo katirsan Hirshabeelle iyo Saraakiisha amaanka ee Jowhar ayaa Kalfadhi u xaqiijiyay in Ciidamo cusub la dejiyay Xarunta Baarlamaanka Hirshabeelle.
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jiray eedeymo ay Xildhibaanada iyo Xubnaha kale ee Hirshabeelle u soo jeedinayeen Madaxweynaha Hirshabeelle iyo ku xigeenkiisa taas oo ku aadan in ay lunsadeyn Kumanaan doolar oo loogu talagalay Hirshabeelle iyo lacago degaanka laga aruuriyay.
Xasan Sheekh Maxamuud oo Beladweyne gaaray
Guddiga Kheyraadka Qaranka ee Aqalka Sare oo ka soo horjeestay Shirka Shidaalka Soomaaliya ee London